बैंक / बिमा /शेयर « GDP Nepal
सीईओ राख्न र हटाउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानको विरोध
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आफ्नो संस्थामा प्रमुख कार्यकारी राख्न र हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानको विरोध गरेको छ । परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्था
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)ले संचालन गर्दै आएको कनेक्ट आईपीएएस ई–पेमेन्ट प्रणाली मार्फत भएका मासिक कारोबार पुस महिनामा १२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । एनसीएचएलको
मलेसियाली कम्पनी म्याक्स-मनीले रेमिट्यान्स पचाउन सकेन, हिमालयन बैंकलाई फर्कायो ३१ करोड !
काठमाडौं । अन्ततः मलेसियाली कम्पनी म्याक्स मनीले हिमालयन बैंकलाई पठाउनुपर्ने रेमिट्यान्सवापतको करिब ३१ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । नेपाली कामदारले पठाएको रकम अपचलन गरेको मलेसियाली रेमिट कम्पनी म्याक्सले बल्ल
वित्तीय क्षेत्र किन आतंकित ?
काठमाडौं मुलुकको वित्तीय क्षेत्र यतिबेला निकै आतंकित छ । यो क्षेत्र बाहिरबाट हेर्दा जति आकर्षक देखिन्छ, त्यसभित्र सूक्ष्म रूपमा प्रवेश गर्दा अनेकौं समस्या देखिन्छन् । बैंकरको पेसालाई नेपाली समाजले ‘ह्वाइट
लक्ष्मी बैंकको चुक्ता पुँजी अब ९ अर्ब ८१ करोड, १९ औं साधारणसभाबाट लाभांस पारित !
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकको चुक्ता पुँजी अब ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । १९ औं साधारणसभाबाट लाभांस पारित भएसँगै पुँजी झन्डै १० अर्ब हाराहारीमा पुगेको हो । साधारण
ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकको मर्जर कि एक्विजिसन ?
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकको मर्जरपछि शनिबार एकीकृत कारोबार सुरु भयो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नै एकीकृत कारोबार उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भएपछि कार्यक्रम कम महत्वपूर्ण भन्ने कुरै
एनएमबि बैंकलाई साफामा कर्पोरेट गभर्नेन्स र वेस्ट प्रिजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट अवार्ड
काठमाडौं । एनएमबि बैंक साकै एनिभर्सरी अवार्ड फर कर्पोरेट गभर्नेन्स २०१८ बाट पुरस्कृत भएको छ । उक्त पुरस्कारले उच्च तहको कर्पोरेट गभर्नेन्स् तथा पारदर्शिताको लागि बैंकको बचनबद्धतालाई प्रदर्शन गरेको जनाइएको
सीएनआई भन्छः उधारो असुलीमा समस्या भयो, कानुन चाहियो
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले उधारो असुलसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको जनाएको छ । परिसंघले उधारोमा बिक्री गरेको सामानको भुक्तानी दोस्रो पक्षबाट नपाउँदा समस्या सिर्जना भएको भन्दै दुवै पक्षलाई बाँध्ने
विपन्न बालबालिकाको आखाँको क्यान्सर उपचारमा लक्ष्मी बैंकको सहयोग
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंक र तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबीच बालबालिकामा हुने आँखाको क्यान्सरको पहिचान र उपचारका लागि सहयोग सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयविक्रम शाह तथा